Beaker, iyo P2P browser yeakaremerwa masosi | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memakore maviri ekuvandudza, kutanga kuburitswa kwakaziviswa yakakosha yekuyedza webhu browser "Beaker 1.0"que inomiririra rutsigiro rwayo rwakasanganiswa yeiyo protocol YeHypercore P2P kutaurirana.
Nechirevo ichi, yakasarudzika yemukati yekuendesa dhizaini inoumbwa, ine node vashandisi vebrowser. Yakadaro network inokutendera iwe kubata webhu kunyorera izvo zvisingade maseva.
Iyo Hypercore protocol inosanganisa blockchain uye BitTorrent matekinoroji. Sezvo neBitTorrent, vashanyi vanotora mafaera kubva saiti uye vanotanga kutora chikamu mukuparadzirwa kwayo.
Musiyano mukuru neHypercore ndiyo kugona kushandura mafaira pasina kugadzira iyo URL nyowani.
Paunovhura iyi link, zvirimo zvinotorwa pasi zvakananga kubva kune yemunyori system, mushure meizvozvo mupi anogona kutora chikamu mukugovera kwayo kune vamwe vashandisi.
Iyo Hypercore protocol inovimba nerekodhi iyo inongowanikwa chete kuwedzera dhata nyowani uye haibvumidze shanduko kune ruzivo rwakatowedzerwa.
Zvinyorwa zvakadaro zvinogona kukurumidza kugoverwa pakati pevabati veNetwork muP2P modhi, nepo node yega yega ichirodha chete zvidimbu zvekufarira rekodhi uye kutanga kutora chikamu mukuparadzira kwavo
Kuvimbika kwechinyorwa kunosimbiswa neiyo "Merkle Muti" chimiro, umo rimwe nerimwe bazi rinoongorora ese ari pasi pematavi nenzvimbo, nekuda kwekubatana hashi (muchimiro chemuti) uchishandisa iyo BLAKE2b-256 hash basa.
Kuve neiyo yekupedzisira hashi, mushandisi anogona kuongorora iko kurongeka kwese nhoroondo yekushanda, pamwe nekururamisa kwenzvimbo dzakapfuura dhatabhesi.
Kugadzira nzvimbo, bhurawuza ine yakavakirwa-mukati kodhi mhariri, zvishandiso zvekufananidza madhairekitori nezvirimo zvesaiti, webhu terminal (rairo koni yekufambisa iyo Hyperdrive nharaunda) uye yakasarudzika API yekuverenga uye kurodha pasi mafaera.
Inotsigira kubatanidza akawanda Hyperdrive nharaunda, sanganisa nharaunda, gadzira maforogo, tora chikamu mukuparadzira enzvimbo dzevamwe vashandisi.
Pamusoro pekugadzirwa kwenzvimbo dzakatemerwa nzvimbo, nzvimbo dzekushandisa dzeBeaker senge kuchinjaniswa kwedata rakavanzika (kuwanikwa kune zviwanikwa kunogona kuwanikwa chete nechisungo chakaziviswa nenzira yehash), iyo musangano wewebhu programming kudzidziswa (mukuita kwacho kunogona kungogumira kubrowser isina mamwe maseru maseru uye zvishandiso), kurerutsa kudyidzana mumapoka ekuvandudza webhu uye kuyedza saiti prototypes (unogona forogo saiti, ita shanduko uye ugovane mhedzisiro).
Maitiro ekuisa Beaker 1.0 pane Linux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa iyi webhu bhurawuza pane yavo distro, ivo vanofanirwa kuziva kuti iro pasuru yeLinux parizvino yakavakwa muAppImage fomati kana kuivaka kubva kunobva kodhi.
Mukutanga kwezviitiko zviviri izvi, isu tinofanirwa kurodha chero epakeji aripo. Isu tinoita izvi kubva kunotevera chinongedzo.
Yenyaya yeApplication senge Semuenzaniso, ini ndichatora yazvino vhezheni 1.0 izvozvi, inotorwa ne:
Isu tinopa mvumo yekuuraya ne:
Uye isu tinoita nekukanda kaviri pane iyo faira kana kubva kune iyo terminal ne:
Zvino, kune avo vanofarira kuvaka iyo bhurawuza kubva kunobva kodhi, vanofanirwa kuve nebtool, m4, autoconf uye automake.
Kuisa maturusi aya, semuenzaniso paDebian, Ubuntu uye chero chinobva pane izvi:
Uye pakupedzisira kuumbiridza bhurawuza, ingo nyora inotevera mirairo:
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona tarisa chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Beaker, iyo P2P browser yemasaiti akasarudzika
AMD K12 dzoka ...: dzosera yako ARM microarchitecture